Icala Lesenzo Sekilasi ku-AOL LIZOSIZA Ubumfihlo | Martech Zone
Icala Lesenzo Sekilasi ku-AOL LIZOSIZA Ubumfihlo
NgoLwesibili, Septhemba 26, 2006 Douglas Karr
UCarlo ku I-Techdirt inendatshana yokuthi icala lesenzo sekilasi lizolimaza kanjani kuphela futhi lingayisizi imboni. Anginaso isiqiniseko sokuthi uCarlo angavuma uma kunjalo wakhe idatha ayiphathise i-AOL futhi yakhululwa nge-Intanethi. Wenza ukucabanga ukuthi iGoogle ne-Yahoo! ziyalandela futhi lolu udaba 'lokusesha'.
Akuyona inkinga 'yokusesha' nhlobo, inkinga 'yesibopho'. Kulesi sikhathi esiphila kuso, izigebengu zigcwala ku-inthanethi zizobamba futhi zisebenzise imininingwane yabantu ukuzenzela ubunikazi bazo ngezinhloso ezingekho emthethweni. Izinkampani ziphathiswe imininingwane yethu futhi kufanele ziyivikele. I-AOL ayigcinanga ngokuyivikela, bayikhiphele ngaphandle lapho noma ngubani angayithola khona!
Ngokuqondene nabameli abathola yonke imali, akukhona ukuthi ngubani oyitholayo. Imayelana nokuthi ubani okhokhelwayo. Izinkampani azinabo ubuntu, azinanembeza, futhi okuwukuphela komthwalo wabo wemfanelo ukwenza imali kubanini bamasheya abo. Ngenxa yalokho, i- kuphela Indlela yokujezisa inkampani futhi ibenze bashintshe indlela ukubamangalela ngemali eshisiwe.
Ngikholelwa kubungxiwankulu futhi angihambisani neze namacala angenamsebenzi. Ngikholwa wukuthi kudingeka kube nemithetho ephasiswayo ukuze owehlulwayo akhokhe zonke izindleko ezihambisana nesudi engasho lutho. Kepha lokhu akuyona enye yazo. Uma i-AOL yehla kanzima ngenxa yalokhu, ezinye izinkampani zizobona futhi zibeke izinyathelo ezifanele zokuvikela ubumfihlo bethu.
Sikhokhela umsebenzi wabo. Basizakala ngemininingwane yethu. Badinga ukuphendula.
Amabhukumaka Omphakathi: Fihla bese Ufuna